Hongria: Mampidi-doza ny toerana fanangonana fako simika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Oktobra 2010 9:17 GMT
Araka ny fanadihadihana, nandrakotra tanàna maro tany antsinanan'i Hongria ny fikorianan'ny fotaka misy poizina simika tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Nahakasika tanàna fito izany fahapotehana izany vokatry ny fikorianan'ny fako misy poizina simika navoakan'ny orinasa iray mpikarakara firaka: Tüskevár, Kolontár, Kisberzseny, Somlóvásárhely, Apácatorna, Devecser, Somlójenő. (Sarintany miaraka amin'ilay toerana fanangonana azo jerena eto.)
Araka ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny sabotsy tao amin'ny gazety any an-toerana Nepszabadsag dia olona fito no niharam-boina, olona iray no tsy hita hatramin'izao. Olona maro no main'ny fotaka misy poizina simika.
Mila famonjena maika
Nanokatra tranonkala ny fanjakana any Hongria manome ny vaovao rehetra mahakasika ity fiparitahan'ny fako menamena ity, momba ny tokony hatao sy ny mahakasika ilay faritra. Hatramin'ny sabotsy, nafindra toerana ny mponina tao Kolontár noho ny mety hisian'ny fiparitahana hafa indray. Tao amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety an-terinety , ny praiministra Hongrois Viktor Orbán nilaza: “[…] ny alina lasa teo dia nisy tataka hita tao ambadiky ny rindrina andrefana manohana ity toeram-panangonana ity; atahorana noho izany ny mety hisian'ny faharavany indray. Nijery izany toe-javatra izany ny manam-pahaizana ary nanamafy fa mitombina tokoa ny mety hisian'ny faharavana, ary hiparitaka indray ny fako misy poizina simika ao ambadika . […]”
Noho izany valandresaka izany dia nafindra ny mponina miisa 750 ao Kolontar, satria mety hatahorana ny hisian'ny fotaka mitsonika indray. Nampandrenesina ny polisy, raha sanatria ka ny kaominina akaiky ny rindrina avaratra, Devecser, misy mponina 6000, no tsy maintsy afindra toerana koa. Mandritra izany rehetra izany dia misy ny fananganana fefiloha hiarovana ny mponina.
Nanokatra kaonty any amin'ny banky koa ny manam-pahefana ary antsoina hoe Hungarian Relief Fund (Vola Hamonjena an'i Hongrie) izany. George Soros, mpandraharaha Hongroà-Amerikana, no nanolotra vola mitentina 1 tapitrisa dôlara ho an'ireo tra-boina, ary George Pataki, governera taloha tany New York, izay manana fihaviana hongrois, no miantso ny Hongroà rehetra manerantany hanampy ny fianakaviana sahirana.
Ity sarimihetsika manaraka ity dia manome vaovao ho an'ireo izay te hanampy ny tra-boina. Novokarin'ny fahitalavitra iray any Hongria ireo sary ireo fotoana fohy taorian'ny nandalovan'ny fotaka be nandrakotra ny tanàna : olona feno fotaka menamena, trano ravan'ny fotaka feno poizina simika.
Tamás Mészáros, mpitoraka bilaogy tany an-toerana, nanoratra izao manaraka izao [HUN] tamin'ny alarobia:
[…] Fiarakodia maro no mandalo eo amin'ny lalana kely anelanelan'i Kolontar sy Devescer. Tazana eo koa ny fiarakodia maro famonjena voina. Helikoptera iray an'ny polisy no misidina eny ambonin'i Kolontar. Ireo fiarabe famonjena voina an'ny tafika, ekipa mpamonjy voina maro, fiarakodia maro an'ny polisy sy an'ny fahitalavitra Duna TV koa hita teny an-toerana. Maka sary eo akaikin'ny lapan'ny tanànan'i Kolontar izy ireo. Mijanona eny amin'ny fihaonan-dalana ny polisy. Mandreraka be ny mijery izany. Fen ity fotaka menamena ity daholo ny zavatra rehetra. Teo amin'ny lavaka akaikin'ny arabe, mbola mikoriana foana ilay fotaka. Eo an-davarangan'ny lapan'ny tanàna, misy olona marobe miaraka amin'ny solosaina fitondra mandehandeha. Mandika teny amin'ny teny anglisy ny sasany amin'ireny. Mivangongo eo am-pidirana ny rano fisotro madio. Ao anatiny, akanjo marobe sy baoty maro no mivangongo. Any ivelany, zavatra maro vita amin'ny vy, kodiarana fiarakodia sy fitaovana fampiasa an-tokantrano marobe no miparitaka eny an-dalana rehetra eny. […]
Tamás koa nitantara [HUN] ny famindrana toerana tamin'ny sabotsy, vokatry ny fotaka izay nanjary efa maina ka nivadika ho vovoka mitakovana indray. Vovoka misy poizina simika koa, izay nanery azy hanao saron-tava nandritra ny fiantsenany.
Manoratra izy [HUN] fa mila baoty vita amin'ny fingotra, fandriana entina mandehandeha ary fanampiana hanadiovana.
Andiana Facebook [HUN] no nosokafana nanaovana ny lisitry ny zavatra tena ilaina any amin'ireo kaominina tra-boina; Magdi Novák ao amin'ny bilaoginy koa manao toy izany.